Fitaovana hanombohana ny famolavolana ny vokatrao | Famoronana an-tserasera
Fitaovana hanombohana mamolavola
Jose Angel | | General, Inspiration, maro
Azo antoka fa efa nandalo olana ianao tamin'ny famoahana endrika zavatra. Amin'ny voalohany dia toa mora kokoa izany, fa rehefa apetrakao io ary tsy tonga ny aingam-panahy dia tonga ny olana. Ka aza milavo lefona. Mba hahasoa ny aingam-panahinao sy ny asanao dia mitondra anao aho fitaovana hanombohana izay tokony hanananao ao amin'ny bara fanoratanao foana.
1 Dafont sy Flaticon
2 Andao hiresaka momba an'i Behance
3 Ny loharanonao dia any Designer
4 Raha mila hevitra ianao, eto CallToIdea
5 Farano amin'ny fomba ny asa
6 Araraoty ny fotoananao, amidio hevitra
Dafont sy Flaticon
Mandeha tsikelikely isika. Isaky ny manomboka mamorona ianao dia tsy afaka tsy mahita zavatra fototra roa ao amin'ny tranombokinao: Sary masina sy endritsoratra. Amin'ny fomba tsy manam-petra, ka tsy mila amin'ny fizotry ny famoronana ianao.
Ireto misy: Dafont ho an'ny endritsika rehetra. Malalaka ny misintona ny rehetra, na dia nosoratana aza izy ireo ary afaka manao fanomezana ianao. Tiako ho fantatrao ihany koa fa tsy maimaim-poana ny zava-drehetra ary maro amin'izy ireo no natao hampiasaina manokana na tsy ara-barotra. Izany rehetra izany dia voalaza etsy ambany ny bokotra 'Download'.
Ho an'ny sarinao dia azonao ampiasaina: kisary fisaka. Ao amin'ity tranonkala ity dia misy lahatsoratra amin'ity pejy ity izay manazava tsara ny fomba fiasan'izy io (Avelako eto: Database Flaticon.)
Manomboka eto dia tsy midika izany fa irery ianao, na hoe tsy manana fanampiana bebe kokoa ianao. Tena lehibe ny Internet ary manome anao ny fahafaha-manana loharanon-karena an'arivony eo am-pelatananao.
Andao hiresaka momba an'i Behance
Betsaka aminareo no hahafantatra ny sehatra tsara indrindra amin'ny mpamorona maro toa an'i Behance. Fa sarotra ny mahita zavatra manokana tadiavinao ny tenanao. Na dia mety ho aingam-panahy hamoronana ny atiny manokana aza izany. Amin'ity mini-tutorial ity dia afaka mahita loharano maro hafa ianao. Vantany vao voatahiry ao amin'ireo maripezinao amin'ny serivisy Interneto ianao, andao hiroso amin'ny dingana manaraka:
Ny loharanonao dia any Designer
Ao amin'ny folder-ko dia tsy misy tsy hita: Designer. Ity tranonkala ity dia misy loharanom-pahalalana marobe, sarina voninkazo, fiara sns. Amin'ny karazana rehetra amin'ny endrika Vector (sary) ary PSD (Photoshop), ankoatry ny hafa, hampiasaina ho loharano ao anaty ny volavolanao.
Atsinanana 'izao tontolo izao'dia be pitsiny sy feno karazany. Misy ny olona manokan-tena kokoa amin'ny fanoharana ary ny hafa misafidy bebe kokoa hanontana. Misy zavatra azo tsapain-tanana kokoa ary, mazava ho azy, mora kokoa ny manatona tombony tena tadiavin'ny olona iray be loatra amin'ny asany. Ho an'ity farany, eto aho mitondra pejy iray tena mahaliana: DownGraf. Ahitana loharanon-karena isan-karazany. Ary maro amin'izy ireo maimaim-poana.
Mila milaza aho fa tsy ny loharanom-pahalalana maimaimpoana rehetra no ampiasaina malalaka, amporisihiko izy ireo hiantso ny aingam-panahinao rehefa mamorona ny asanao
Raha mila hevitra ianao, eto CallToIdea
Tranonkala iray hafa izay tsy ilaiko dia: CallToIdea. Ity tranonkala ity dia tsy misy afa-tsy sary santionany ao amin'ny JPG / PNG. Priori, toa tsy dia ilaina loatra izany. Fa raha tsapanao izany dia azonao atao ny maka sary an-tsaina hevitra maro hamoronana endrika 'pejy tsy hita ',' logins ',' profiles', sns.
Ny ankabeazan'ireo fitaovana ireo dia mifantoka amin'ny tranonkala. Noho izany, amin'ny maha mpamorona anao dia angatahina ianao hamorona tranokala manana endrika manokana. Ataovy am-boalohany, intuitive, ilaina ... Eny, eto ireo antsipiriany kely rehetra toy ny fidirana tsotra dia afaka manampy anao rehefa mamorona.
Farano amin'ny fomba ny asa
Mba hamaranana ny asa dia mila mamorona antsipiriany farany ianao, satria ireo no 'mockup'. Miaraka amin'izany, raha vantany vao vita ny famolavolana, raha te hanolotra azy amin'ny tranokala ianao dia manome sary matihanina bebe kokoa. Ho an'ity dia azonao atao ny mamorona azy ireo, na dia sarotra aza izany amin'ny voalohany dia ity misy lahatsoratra iray izay misy ohatra maro (na dia azonao atao aza ny mitady ny hafa): pixellegancy
Araraoty ny fotoananao, amidio hevitra
Ary farany, vantany vao vita ny asa rehetra amin'ny valin'ny famolavolana lehibe, Misy tranokala ahazoana vola ve? Fahita matetika io fanontaniana io, ary ny valiny dia Ie. Eny misy. Betsaka ny amin'ny fiteny hafa, saingy tsy dia maro amin'ny teny espaniola. Behance, araka ny nolazaiko tany am-piandohana, dia azo ampiasaina hampiroboroboana ny tenanao mba hahitan'ny olona ny asanao, fa tsy ny hamidiny irery. Azonao atao ihany koa ny mamorona bilaoginao manokana ary mampakatra ny vokatrao, saingy azo antoka fa mila fotoana bebe kokoa ianao hahombiazana aminy. Manolotra anao aho: GraphicLemonade.
Ity pejy ity dia ampiasaina hivarotana ny vokatrao amin'ny Internet sy amin'ny Espaniôla. Ny tombony? Mazava ho azy ny fiteny, satria afaka miresaka amin'ny serivisy teknika ianao hamahana olana ary ny tsara indrindra dia ny fandoavana. Izay andraisanao a 70% amin'ny varotra ny vokatrao. Zavatra mbola tsy hitako hatreto. Manome eo anelanelan'ny 30 sy 50% matetika izy ireo. Misafidy ianao. Mazava ho azy, raha mahita bebe kokoa ianao dia soraty ao anaty hevitra mba hanampiana anay roa.
Manantena aho fa hanomboka anao ireo fitaovana kely rehetra ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Fitaovana hanombohana mamolavola
Jose Angel dia hoy izy:
Mazava ho azy, napetrako teo amin'ny tsoratadidy io tranonkala io, misaotra betsaka noho ny fandraisanao anjara! Eto izahay mba hanampy anay. :)
Valiny tamin'i Jose Ángel
Soratako izany. Misaotra betsaka!
Raha malahelo ilay fikandrana "antontan-taratasy" taloha ao amin'ny Photoshop CC 2017 ianao dia misy ny vahaolana
Alphabets taloha ho an'ny taratasy